YANGON မှာ Download ချရင် ဘယ်ဆိုင်အမြန်ဆုံးလဲ — MYSTERY ZILLION
YANGON မှာ Download ချရင် ဘယ်ဆိုင်အမြန်ဆုံးလဲ
ရန်ကုန်မှာ ရှိတဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်တွေထဲမှာ ဒေါင်းလော့ ဆွဲလို့အကောင်းဆုံးဆိုင်ကို သိတဲ့သူများရှိရင် ပြောပြကြပါခင်ဗျာ.. အင်တာနက်ဆိုင်ဖွင့်ထားသူများအနေနဲ့ ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာ မိမိဆိုင် ကို ကြော်ငြာ တဲ့ သ​ေဘာမျိုး နဲ့ မရေး စေချင်ပါ..USER တွေ က ပဲ သုံးစွဲဘူးတဲ့ဆိုင်ကို ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်
အဟ.. အင်တာနက်ဆိုင်က အစ်ကိုတွေမမ တွေက ကြော်ငြာမှာမဟုတ်ဘူး ဗျ.. ဘာလို့လဲဆို... အင်တာနက်ဆိုင်တော်တော်များများက ဒေါင်းလော့လာဆွဲမှာကြောက်လို့လေ.. :P ဟုတ်ဘူးလားဗျ..
ဟုတ်လိုက်လေ ဗျာ။ ဘယ်သူက ကြေငြာမှာလဲ :-D
Skynet သုံးတဲ့လိုင်းတွေ ဆိုရင် အခု mediafire , filesonic , youtube , ကနေ ဒေါင်းတဲ့ဟာမှန်သမျှ ၊ full download speed ကော ၊ resume ကော မ၇ဘူး ဖြစ်နေတယ်ဗျ။............
ခလေးတွေဆူဆူညံညံ network game လာဆော့တဲ့ ဆိုင်ကိုရွေးပါ ခလေးတွေဆူတော့ internet သုံးသူတွေမလာကြတော့လို့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းစိတ်ကြိုက်သုံးပေတော့
work @... MICT park..
mayb.. ACE DataSystem .. =>1mb~3mb
mayb.. Grape City =>2mb (at least)
ကျွန်တော်တွေ့တာတော့ Network Game ပါပါတဲ့ ဆိုင်မျိုးကျတော့ ကလေးတွေက Download လေးဆွဲရင်း Game ဆော့နေတာ။ ကိုယ်တွေ့တွေ . . . ^^
လသာဘုံကျောင်းရှေ့မှာတစ်ညလုံးသုံးနှစ်ထောင်ဆိုတဲ့ဆိုင်ရှိတယ်ဗျ ဂိမ်းသမားများတယ် ဆွဲပါလိမ့်
ကြည့်၇တာ ၊ ညအိပ်မှ ဒေါင်း၇မယ်နဲ့တူတယ် ၊ ညလုံးပေါက်ဆိုတော့ ၊ ခေါင်းအုံး တွေပါယူသွား၇မယ်ဗျ :-D
wow ဆော့တဲ့ဆိုင်တွေရှောင် ၊ နိုမို့ဆို အဆဲခံရလိမ့်မယ်။ :P ကျွန်တော်သတိထားမိသလောက်တော့castle ကတကယ်မြန်ပါတယ်။ အခုတော့မသိတော့ပါ။